समयको कठघरामा ‘स्वस्थानी व्रतकथा’: महिलामाथि दासताको पर्याय
तर आश्चर्य लाग्दो कुरा त के छ भने स्वस्थानी व्रतकथा आखिर के हो ? कसले लेख्यो र यसको इतिहास कति पुरानो छ ? भन्ने बारेमा कमै नेपालीले चासो लिएको देखिन्छ । अझ त्यसमा पनि महिलाहरूको चासो त नगन्य नै छ । जबकी पंक्तिकारको जनकारीमा आए अनुसार स्वस्थानी व्रतकथाको बारेमा तीन जना विदेशी पश्चिमा महिलाहरूले गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गरेको पाइन्छ । जसमा अमेरिकी महिला लेन वेनेट, लिण्डा लुइस इल्टिस र जेस्सिका भेन्टिन बर्केन्होल्ज रहेका छन् । मुख्यतः लेन वेनेटको लैङ्गिक अध्ययन र जेस्सिकाको ऐतिहासिक अध्ययन रहेको देखिन्छ ।
जेस्सिकाकै सोधपत्रमा आधरित रहेर अध्ययन गर्दा स्वस्थानीको इतिहास जम्माजम्मी साँढे चार सय वर्ष मात्र रहेको देखिन्छ जबकी स्कन्द पुराणको इतिहास १२०० वर्षको छ । स्कन्द पुराण लेखिएको ८०० वर्ष पछि लेखिएको स्वस्थानी कथा आखिरमा हो के त ? आँखा चिम्लेर पुष माघको चिसोमा पोखरीमा डुब्दै एकसरो पहिरन र खाली खुट्टामा एक महिना बिताउने महिलाले चासो दिनु जरुरी छ कि छैन ? प्रश्न महत्वपूर्ण हुन सक्छ । जे होस्, संछिप्तमा भन्दा राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेको लगत नं १९१ को संस्कृत स्वस्थानी सर्वप्रथम वि।सं। १६२९९ने।सं।६९३०मा लेखिएको र यो जम्माजम्मी ८ पत्रको रहेको र पछि विस्तारित हुने क्रमसँगै यसमा विभिन्न पुराणहरूका अनेक प्रसंगहरू थपिँदै आजको बृहत् रुपमा आएको मानिन्छ । संस्कृतमा लेखिएको ३० वर्ष पछि नेवारी भाषामा ३४ पत्रे र २३७ वर्ष पछि मात्र नेपाली भाषामा ५५ पत्रे स्वस्थानी लेखिएको अध्ययनबाट जानकारीमा आएको छ ।
मानिसहरू भित्रको आस्था सबैभन्दा बलियो हुन्छ । अझ धार्मिक आस्था त यति मजबूत हुन्छ कि यसलाई भत्काउन त्यति सजिलो छैन । त्यसैले त करिब साढे चारसय वर्ष अघि विसं १६२९ लेखिएको एउटा सानो स्थानीय कथाले विस्तारै आफ्नो कथनलाई फैलाउँदै ठूलो आकार लिएर आज पनि व्यापक मान्यता प्राप्त गरिरहेछ । शुरुमा एउटा कुनै जातिविशेष ९नेवार०ले गर्ने गरेको व्रत आज अन्य जातिले पनि गर्ने गरेको पाइनुले यो एउटा सिमित घेराबाट माथि उठेको देखिन्छ । तर पनि पछिल्लो समयमा स्वस्थानी व्रतप्रति विभिन्नखाले टिकाटिप्पणीहरू गर्ने गरिएको पाइन्छ । यो जायज पनि छ । स्वस्थानी व्रतकथाले महिलालाई होच्याएको, महिलामाथि हिंसा र विभेद गर्न प्रेरित गरेको आरोप पनि छ । कतिपयले स्वस्थानीलाई महिलामाथि पुरुषहरूले थोपरेको दासताको भारी भन्ने गर्छन् भने कतिले यो नेपाली समाजको मौलिक संस्कृति भएकोले यसको संरक्षण र निरन्तरता हुनु आवश्यक ठान्छन् । त्यसो भए आजको समाजमा स्वस्थानीको औचित्य सकिएकै हो भने फेरि किन हरेक वर्ष शाली नदीमा व्रतालुहरूको भिड बढिरहेकै छ त ?
स्वस्थानी व्रतकथा नेपालको मौलिक धार्मिक संस्कृति भएको र यसले तत्कालीन नेपाली समाजको वास्तविक परिवेशलाई जीवन्त राख्ने काम गरेको हुँदा यसको संरक्षण र निरन्तरताको खाँचो छ भन्ने कतिपयको धारणा पाइन्छ । उनीहरूका अनुसार यो एउटा विशुद्ध धार्मिक कथा मात्र नभएर आफैमा एउटा इतिहास पनि हो । यो परंपरागत नेपाली सामाजको प्रतिबिम्ब पनि हो । त्यसैले यसलाई परंपरागत धार्मिक संस्कृतिको रुपमा संरक्षण गरिनु जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा संस्कृतिविद् महेश्वर जुजु राजोपाध्याय भन्छन् ‘कुनै पनि संस्कृति राष्ट्रको सम्पदा हो । राष्ट्रको अस्तित्व जोगाउन संस्कृतिको पनि जगेर्ना गर्नुपर्छ । स्वस्थानी कथा लेख्नुको उद्देश्य पनि यही हो ।
स्वस्थानी व्रतकथामा उल्लेखित पात्रहरू महादेव, सतीदेवी तथा पार्वतीको सम्बन्ध नेपालकै पवित्र तीर्थस्थल पाशुपत् क्षेत्रसँग रहेकोले स्वस्थानीको महत्वको पनि यस क्षेत्रसँग जोडिएको छ । शिव–पार्वती नेपालका प्राचीन आदिवासी किराँतहरूका आराध्य देव भएको र स्वस्थानी नेपालको किराँतकालीन इतिहास भएकोले यसको महत्वलाई जोगाइराख्न स्वस्थानी व्रत परंपरालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक हुन्छ । त्यसै गरि गोमा नवराजको कथाको सेरोफेरोले वनेपा र भक्तपुरलाई समेटेको हुनाले पनि स्वस्थानी नेपालको प्राचीन इतिहास हो भनेर भन्न सकिन्छ । अतः इतिहासको संरक्षण गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।’
त्यस्तै गरि संस्कृतिविद् तेजेश्व बाबु ‘ग्वंग’ पनि स्वस्थानी नेपालको मौलिक संस्कृति भएको र यसको आफ्नै धार्मिक महत्व भएकोले यसको संरक्षण र निरन्तरता जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘स्वस्थानी कथाका विभिन्न प्रसंगहरूले महिलालाई होच्याएको र अपमानित गरेको हुँदा आजको परिवर्तित परिवेशमा यसलाई परिमार्जित गर्नु आवश्यक भएको’ भन्दै उठिरहेका आवाजको सन्दर्भमा र स्वस्थानीको औचित्य सम्बन्धमा भाषाविद् तथा स्वतन्त्र अनुसन्धाता काशिनाथ तमोट भन्छन् ‘स्वस्थानी नेपाल मण्डलमा विकास भएको मौलिक कथा भएतापनि कालान्तरमा यसलाई पौराणिक कथासँग लगेर जाडियो र यसलाई पुराण भन्न थालियो ।
जे भएतापनि यसले नेपालको मौलिक धार्मिक परंपराको रुपमा स्थान पाइरहेकोले यसमा परिमार्जन गर्नु उचित हुँदैन किनकी यसमा नेपालको तत्कालीन समाजको परिवेश समेटिएको छ । आजको समयमा आएर त्यो समाजको परिवेश जान्नको लागि स्वस्थानीको कथाले मद्दत गरेको हुनाले यसको जीवन्तताको लागि निरन्तरता पनि जरुरी छ । यसलाई तोडमोड गर्नासाथ यसको मौलिकता हराएर जाने हुँदा यसलाई परिमार्जन गर्नासाथ यसको महत्व र स्वीकारोक्ति पनि हराउँछ ।’
अन्तमा, एउटा सत्य के हो भने स्वस्थानी व्रतकथा पनि आजको साहित्य जस्तै तत्कालीन समाजको साहित्य हो र यसले मात्र सो समयको परिवेशलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । त्यसैले यसलाई कुनै त्राशद धार्मिक मनोविज्ञानको रुपमा नलिएर आजका कथा वा उपन्यास साहित्य पढेजस्तै गरि पढिदिऊँ । संस्कृति जोगाउने नाममा आफूभित्रको असिमित नारीशक्तिलाई कमजोर नपारौं । बुझ्नेले बुझ नपचाऊँ, नबुझेकालाई बुझाऊँ । अबका महिलाले हातमा फूल लिएर स्वस्थानी–कथा पढ्दै र सुन्दै सतीदेवी, पार्वती, बृन्दा, गोमा र चन्द्रावतीका दुःखमा आँसु नझारौं बरु अबका कुनै छोरीले सतीदेवी, गोमा, बृदा वा चन्द्रावतीको जस्तो नियति भोग्न नपरोस् भन्नेतिर सजग रहौं । खुलेर स्वस्थानी–कथा बारे बहस गरौं । (पन्त स्वतन्त्र लेखक हुनुहुन्छ ।)
–साभारः महिला खबर डट कम